के हो एनसेलको वायरफ्री प्लस होम इन्टरनेट? शुल्क कति लाग्छ? - Technology Khabar
» के हो एनसेलको वायरफ्री प्लस होम इन्टरनेट? शुल्क कति लाग्छ?
Technology Khabar २८ चैत्र २०७७, शनिबार
एनसेल फिक्स्ड वायरफ्री+ होमनेट एउटा प्लग एन्ड प्ले सर्भिस हो। यो सेवा एनसेलले उपलब्ध गराउने डिभाइमा एनसेलको सिमकार्ड राखेपछि सजिलै कनेक्ट हुन्छ।
यो सुविधा सबै ठाउँमा पुग्न बाँकी रहेकाले सबैभन्दा पहिले एनसेलमा सम्पर्क राखेर आफ्नो ठाउँमा चल्छ या चल्दैन भन्ने यकिन गर्नुपर्छ। चल्ने भए एनसेलकै कर्मचारीलाई भनेर घरमा सिस्टम इन्स्टल गर्न लगाउनुपर्छ।
यो सिस्टम राखेपछि इन्टरनेटको ब्याण्डविथ आफ्नो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। एनसेलको वायरफ्री प्लस इन्टरनेट सेवा अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकका केबल फाइबर नपुगेका ठाउँमा पनि सजिलै जोड्न सकिन्छ। यसको कभरेज धेरै भएकाले सेवा लिन सजिलो हुन्छ।
एनसेलको वायरफ्री प्लस होमनेट र केबल इन्टरनेटमा के फरक छ?
केबल इन्टरनेटको गुणस्तर उक्त नेटवर्कमा भएका यूजरको सङ्ख्यामा भर पर्छ। नेटवर्कमा यूजरको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि इन्टरनेट स्लो हुँदै जान्छ। तर एनसेलको वायरफ्री प्लस होमनेटले डेडिकेटेड कनेक्शन दिने भएकाले उक्त नेटवर्कमा जति नै यूजर बढेपनि इन्टरनेटको स्पीड तलमाथि हुन पाउँदैन।
के एनसेल फिक्स्ड वायरफ्री प्लस होमनेट वाइ फाइ जस्तै हो?
झट्ट सुन्दा उस्तै लागे पनि एनसेल फिक्स्ड वायरफ्री प्लस होमनेटले वाइ फाइले भन्दा छुट्टै र डेडिकेटेड फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्छ भने यसमा प्रयोग हुने अन्य प्राविधिक उपकरणहरुले उच्च गतिको इन्टरनेटका साथमा भरपर्दो सेवा प्रदान गर्छन्।
यसलाई मोसमको खराबीले कुनै प्रभाव पार्छ कि पार्दैन?
वायरफ्री प्लस होमनेट सेवा ताररहित हुने भएकाले पानी पर्दा कुनै बेला इन्टरनेटको स्पीड केही स्लो हुन सक्छ। त्यसबाहेक अन्य समस्या आउँदैन। जडान गर्ने बेला प्राविधिकले यस्ता सम्भावना पनि हेरेर सकेसम्म समस्या नआउने गरी जडान गरिदिन्छन्।
वायरफ्री+ होमनेट कनेक्शनको शुल्क कति लाग्छ?
एनसेलले यूजरहरुको बजेटअनुसारका थुप्रै सेवाहरु ल्याएको छ। ती सेवाका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ। तत्कालका लागि वायरफ्री+ अन्तर्गत होमनेट सुपर र होमनेट म्याक्स गरी दुई सेवा उपलब्ध छन्।
यसको सिग्नल कति टाढासम्म पुग्छ?
राउटर नछेकिने गरि राखिएको छ भने वरीपरि १०० मिटरसम्म यसको इन्टरनेट सिग्नलले राम्ररी काम गर्छ। यसका लागि आवश्यक सबै उपकरण एनसेल आफैंले उपलब्ध गराउँछ जसमा राउटर, पावर एडप्टर र एन्टेना हुन्छन्। यी उपकरण जोडेपछि बिजुली मात्रै जोडे पुग्छ अन्या बाहिरी उपकरण आवश्यक हुँदैन।
कसरी शुल्क तिर्ने? रिचार्ज गर्ने?
शुल्क तिर्नका लागि ई-सेवा, खल्तीजस्ता अनलाइन पेमेन्ट गेटवेहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ साथै रिचार्ज कार्डमार्फत् र पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) बाट फन्ड ट्रान्सफर पनि गराउन सकिन्छ। यसबाहेक एनसेलको सिममार्फत वा एनसेलको वेबसाइट https://payment.ncell.axiata.com/) मा गएर पनि रिचार्ज गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७७, शनिबार
सामसुंग एस सेभेन तथा एस सेभेन एज यहि बुधवार नेपालमा सार्वजनिक हुँदै,चैत्र ६ गतेदेखि ग्राहकको हातमा
२३ फाल्गुन २०७२, आईतवार
स्मार्ट वाचमा आगामी वर्षदेखि १५ प्रतिशत अन्तशुल्क कर, मोबाइल फोनको अन्तशुल्क पुरानै कायम
वानप्लसको स्मार्ट घडी आउँदै, सन् २०२१ देखि बजारमा उपलब्ध हुनसक्ने
भारतमा अक्टोबर १ देखि कलर टेलिभिजन महंगो हुने, नेपाली बजारमा के असर पर्ला ?